२९ वर्ष पछि शनि आफ्नो राशिमा, कुन राशिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ! जानी राखौ « Nepal's number 1 Entertainment news portal
२९ वर्ष पछि शनि आफ्नो राशिमा, कुन राशिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ! जानी राखौ
Published :9August, 2020 8:41 am
मानिसलाई दुईवटा ठुला शक्तिले निरन्तर रुपमा प्रभाव पारिरहेकाे हुन्छ । पहिलो ब्रह्माण्डीय शक्ति, जसमा ग्रह राशि तथा नक्षत्र हरुको प्रभाव नित्य रुपमा परिरहेको हुन्छ भने अर्काे जमिनबाट आउने भू–चुम्बकीय तरङ्ग ।
यी दुईवटा शक्तिकोबीचमा रहेका हामी मानिसले दैनिक संङ्घर्स गरिरहेका हुन्छौं । कसैलाई थोरै मिहेनत गरे पनि राम्रो परिणाम प्राप्त भईरहेको हुन्छ भने कसैले कडा परिश्रम गर्दा पनि सोचेअनुसार भईरहेको हुँदैन । यदि कर्म मात्रै गरेर सफल हुने हो भने काम गरेका जति सबैजना सुखी तथा आनन्द तरिकाले जीवन बिताउँथे । मानिस सुखी या दुखित् यसको परिणाम उसले गर्ने कर्ममा निर्भर रहन्छ ।